Public Health in Myanmar: August 2009
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တိုးတက်လာအောင် ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ၂၁ရာစု ကမ္ဘာနဲ့အ၀ှမ်းမှာ ဘက်ပေါင်းစုံ၊ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း အလိုက် ပြုလုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကနေ နိုင်ငံတော် အဆင့်၊ ကမ္ဘာ့ အဆင့်မှာ ပြုလုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေ အထိ ကျယ်ပြန့်နက်နဲ လှပါတယ်။ ရှေးယခင်တုန်းကတော့ ကျန်းမာရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဆေးရုံတွေ၊ ကျန်းမာရေးဌာနတွေနဲ့ပဲ ဆက်စပ်ပေမယ့် ယနေ့ခေတ်ကာလမှာကျတော့ ဒီစကားလုံးဟာ အိမ်၊ အလုပ်ခွင်၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ လူငယ်စင်တာ၊ လမ်းမပေါ်စတဲ့ နေရာတွေအထိ ရောက်နေပါပြီ။ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာပေး ပိုစတာတခုကို လမ်းမပေါ်မှာ ကပ်ထားတာဟာလဲ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်တဲ့ လုပ်ငန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေးဟာ ဘာကြောင့် အရေးကြီးရပါသလဲ။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အရေးကြီးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ကျန်းမာရေးဆိုတာ လူသားတိုင်း ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး တစ်ရပ် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကျန်းမာရေးဆိုတာ ရောဂါကင်းဝေးရုံ၊ နာမကျန်းဖြစ်မှု ကင်းဝေးရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ကာယ၊ စိတ္တ၊ လူမှု ကောင်းမွန် ပြည့်ဝနေတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ကို ခေါ်ဆိုတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ကြီးက အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ဆိုတာကို အခွင့်အရေး တစ်ရပ်အနေနဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်မှုကို နိုင်ငံသား၊ လူမှုရေး တရားမျှတမှု စတဲ့ သဘောတရားတွေနဲ့ ဆက်စပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ပညာရှင် Plant (1998) က နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေဟာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနဲ့ စီးပွားရေးရာ လုံခြုံရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ့် အရင်းအမြစ်တွေကို ရရှိခံစားခွင့် ရှိတယ်လို့ ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသဘောတရားအရ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေဟာ သူ့နိုင်ငံထဲမှာ မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လုံခြုံရေးတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိပါတယ်။ လူမှုရေး တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ သဘောတရားမှာကျတော့
(၁) လွတ်လပ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဟာ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ တန်းတူညီမျှမှု ဖြစ်တယ်။
(၂) နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတိုင်းဟာ သူတို့ရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို ပြည့်မီ နိုင်စေမယ့် အခွင့်အရေးတွေကို ခံစားခွင့် ရှိတယ်။
(၃) မိမိကိုယ်ကို ရိုသေ လေးစားမှုနဲ့ ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ် ဖန်တီးနိုင်ခွင့် အတွက် ကျယ်ပြန့်တဲ့ နိုင်ငံသား အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်။
(၄) တန်းတူညီမျှမှု မရှိတာတွေ အားလုံးဟာ တရားမျှတမှု မရှိတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တရားမျှတမှု မရှိလို့ ဖြစ်ရတဲ့ တန်းတူညီမျှမှု မရှိတာတွေကို လျှော့ချပေးပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖယ်ရှား ပစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အခြေခံ စည်းမျဉ်း လေးချက် ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အခွင့်အလမ်းဟာ ဒီသဘောတရားနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုတာ လူမှုရေး တရားမျှတမှု အခွင့်အလမ်း တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်းအမြစ်တွေ ရှားပါးနေချိန်မှာ ကျတော့ ဒီအခွင့်အလမ်းကို လူသား အားလုံး အပြည့်အ၀ရရှိဖို့ အလွန်ပဲ ခဲယဉ်းပြန်ပါတယ်။ အရင်းအမြစ်တွေကို မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ဘယ်လို ခွဲဝေအသုံးချမလဲ ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ အရေးကြီးလာပြန်ပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ အခွင့်အလမ်း တစ်ခုထဲပေါ်မှာတင် မမူတည်ဘဲ စာရိတ္တရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးရာတွေ အားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။
ဒီအခါမှာ တာဝန် ဆိုတဲ့ သဘောတရားက အရေးပါလာ ပြန်ပါတယ်။ လူသားတိုင်း ကျန်းမာရေး အခွင့်အလမ်းကို ခံစားခွင့်ရှိဖို့ ဘယ်သူ့တာဝန်လဲ ဆိုတဲ မေးခွန်းက ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုယ်တိုင် တာဝန်ရှိတယ်လို့ တချို့က ယူဆကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ လူတစ်ဦးချင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိမှုထက် ကျော်လွန်တဲ့ ပြင်ပ အကြောင်းအရာများစွာက လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေတဲ့ အစားအစာများကို စားသောက်ခြင်း လုပ်တဲ့အခါမှာ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်စားသောက်မှု၊ ဒီလို စားသောက်နိုင်စေမယ့် ၀င်ငွေ၊ အစားအစာ ထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့ အစားအစာ အရည်အသွေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှု၊ သယ်ဆောင် ဖြန့်ဖြူးရေးမှာ အရည်အသွေး အဆင့်အတန်း ထိန်းနိုင်မှု၊ အစားအစာတွေရဲ့ ဈေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစိုးရရဲ့ တာဝန် စတာတွေအများကြီးနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရှင် Adams, Amos, Munro (2001) တို့က ကျန်းမာရေးဆိုတာ လူတစ်ဦး၊ တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှု ပေါ်မှာတင် မူတည်တာမဟုတ်ဘဲ လူမှု အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ပုံ၊ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး မူဝါဒနဲ့ စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးတွေ အပေါ်မှာပါ မူတည်ကြောင်း အဆိုပြု ထားခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာလဲ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကလဲ လူသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး အခွင့်အလမ်း ခံစားနိုင်မှုပေါ်မှာ ပြန်ပြီး မူတည် နေပြန်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှု၊ စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
ကျန်းမာရေးကို တချို့က ဘ၀ အောင်မြင်စေတဲ့ The means to end အနေနဲ့ သုံးသပ်ပြီး၊ တချို့ကကျတော့ အကျိုး ခံစားခွင့် ရှိစေတဲ့ an end itself အနေနဲ့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ The means to end အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုတာ ဘ၀ရဲ့ တိုးတက်အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိစေနိုင်မယ့် မောင်းနှင်အားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင် Seedhouse (1986) က ကျန်းမာရေးဆိုတာ အောင်မြင်မှုရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်လို့ ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မကောင်းရင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ပညာရေး အခွင့်အလမ်း၊ လူမှုနဲ့ တစ်ဦးချင်း ဆက်ဆံရေး အခွင့်အလမ်းတွေ လျော့ကျသွားပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချက်ဟာ တန်းတူ ညီမျှမှု မရှိတာတွေ အားလုံးကို ဖန်တီးတာ မဟုတ်ပေမယ့် လူသားတွေရဲ့ သူတို့ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေထိုင်စံစားခွင့်နဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ အပြည့်အ၀ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် တွေကို ကန့်သတ်ထားတတ်ပါတယ်။
ဆူဒန်နိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူ စာချုပ် ချုပ် ဆိုပြီးစဉ် ကာလတုန်းက ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ ဆူဒန်နိုင်ငံ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် David Nabarr (1995) က ဆူဒန် ပြည်သူတွေဟာ ရောဂါဘယဆိုးတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး အသီးအပွင့်ကို အပြည့်အ၀ မခံစားကြရသေးကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ သာယာဝပြောရေးကို ဆောင်ကျဉ်း ပေးနိုင်ဖို့ အတွက် ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ အများအပြား ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ် ရှုမြင် သုံးသပ်မှု တစ်ရပ်ကတော့ an end in itself အနေနဲ့ မြင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရှုထောင့်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုတာ သူ့သာသာသူ ခံစားခွင့်ရှိတဲ့ အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပြီး၊ ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှု၊ ခွဲခြား ဆက်စပ်မှုနဲ့ လူဦးရေ များပြားမှုတွေဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး ခံစားခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူနေမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုဟာ ကျန်းမာရေး မကောင်းတဲ့ ပြဿနာကို လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ ပညာရှင် Crawford (1990) က ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
လက်တွေ့မှာကျတော့ ကျန်းမာရေးဆိုတာက means လဲ ဖြစ်သလို ends လဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာပြီး စွမ်းရည်ရှိတဲ့ လုပ်သားတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စီးပွားရေး အဆောက်အအုံကို တည်ဆောက်ရမှာ ဖြစ်သလို၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရှိမှလဲ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး အခွင့်အလမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် လူမှု၊ စီးပွား မူဝါဒတွေဟာ ဒီရှုထောင့် နှစ်မျိုးစလုံးမှာ မျှမျှတတ ချမှတ် ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒတွေဟာ နိုင်ငံတော်အဆင့်၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ အရေးကြီးတဲ့ မူဝါဒတွေ ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဟာ ၂၁ရာစုကမ္ဘာရဲ့ အရေးကြီးလုပ်ငန်းတာဝန်တွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
၁၉ ရာစုနဲ့ နှစ်ဆယ်ရာစု ကနဦးပိုင်းတုန်းက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လှုပ်ရှားမှုဟာ အနံ့အသက်၊ အပုပ်အဆွေး၊ ညစ်ပေမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၁ ရာစုနှောင်းပိုင်းရောက်တော့ လူမှုရေးဆေးပညာဟာ ဆေးပညာရပ် တစ်ခုအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပေါ်လာတာကြောင့် ရောဂါတွေကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုတဲ့ စနစ်သစ် ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ပညာရှင်တွေက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဟောင်း ('Old' public health) လို့ အမည် ပေးခဲ့ ကြပါတယ်။
၁၉၇၀ ကာလတွေ ရောက်တော့ ပြည်သူ့ ကျန်းမာရေးသစ် ('New' public health) လှုပ်ရှားမှုတွေ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေက ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့်မှုမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ အားနည်းချက်တွေကို သိမြင်ခဲ့ကြပြီး၊ ကျန်းမာရေးအပေါ် ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး သက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အချက်တွေကိုပါ ထည့်သွင်း စဉ်းစားလာခဲ့ ကြပါတယ်။
၂၁ ရာစု ရောက်တော့ ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး (modern multidisciplinary public health) လှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်လာပါတယ်။ ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆိုတာက ရောဂါတွေကို ကာကွယ်ရေး၊ အသက်ရှည် ကျန်းမာရေးနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ စုပေါင်း ကြိုးပမ်းမှုနဲ့ ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ပေးတဲ့ သိပ္ပံ၊ ၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ် တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ လေ့လာသူတွေမှာ ဆေးပညာရှင်တွေ သာမက ဘောဂဗေဒ ပညာရှင်တွေ၊ သမိုင်း ပညာရှင်တွေ၊ လူမှု မနုဿဗေဒ ပညာရှင်တွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး ပညာရှင်တွေပါ ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ရောဂါဘယများအား ကုသခြင်း၊ ရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် တားဆီးခြင်းနဲ့ ကျန်းမာ ပြီးသား ပြည်သူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခြင်းတွေနဲ့ မြှင့်တင် ပေးလို့ရပါတယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာ များစွာ ရှိပါတယ်။ Earl (2007) က ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ကျန်းမာရေး ပညာပေးရေး (health education)၊ ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေး (Health improvment)၊ ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့်ရေး (health promotion)၊ ကျန်းမာရေး မူဝါဒ (health policy) ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး (health protection)၊ မကျန်းမာမှု ကာကွယ်ရေး (Prevention of ill- health) စသဖြင့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေကို ခွဲခြား ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ပညာပေးရေး ဆိုတာက သတင်း အချက်အလက်နဲ့ အကြံဥာဏ်ပေးမှု၊ ကျန်းမာရေးကို ကိုယ်တိုင် စောင့်ရှောက်နိုင်မယ့် အသိပညာဗဟုသုတ၊ အမြင်၊ တန်ဖိုးစံနဲ့ စွမ်းရည်တွေ ရှိလာအောင် လူအများကို ဗဟုသုတပေးမှု၊ သင်တန်းပေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်အောင် အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးမှု(ဥပမာ- ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများ စားတာဟာ အသားစားတာထက် ပိုပြီး ကောင်းတယ်) စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေး ဆိုတာကတော့ ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာ ကျန်းမာရေး မညီမျှမှုတွေကို လျော့ကျစေဖို့အတွက် ဆောင်ရွက်တာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အစားအစာ သမ၀ါယမ လုပ်ငန်း စတာမျိုးတွေပါ။ ကျန်းမာရေး တိုးမြှင့်ရေး ဆိုတာကတော့ လူတွေရဲ့ မိမိ ကျန်းမာရေးကို မိမိ ကိုယ်တိုင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်း တိုးမြင့်စေရေး ဖြစ်ပါတယ်။
မကျန်းမာမှုကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးမှာ အဆင့်သုံးဆင့်ရှိပါတယ်။ ကနဦးကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ ရောဂါဆိုးတွေကို ကာကွယ်ရေး ပြုလုပ်တာ (ဥပမာ- ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း)၊ ဒုတိယအဆင့် ကာကွယ်ရေးအနေနဲ့ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုပုံမှန်လုပ်တာ၊ ကုသမှုခံယူတာ (ဥပမာ- သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ စစ်ဆေးခြင်း) နဲ့ တတိယအဆင့် ကာကွယ်ရေး အနေနဲ့ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရောဂါ ဆက်လက်တိုးသွားခြင်း မရှိအောင် ကာကွယ်ကုသခြင်း (ဥပမာ- hip အစားထိုး ခွဲစိတ်ကုသခြင်း) စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး အန္တရာယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဆိုတာကတော့ ကူးစက် စေနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ (တီဘီရောဂါ)၊ မကူးစက်နိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေ (ဥပမာ- ဓာတုပစ္စည်း လောင်ကျွမ်းမှု) နဲ့ အရေးပေါ် တုန့်ပြန်မှုပေးတာ (ဥပမာ- ဇီဝအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခြင်း) စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး မူဝါဒ ဆိုတာကတော့ အစိုးရတွေရဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ တန်ဖိုးထားမှုဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တန်ဖိုးဆိုတာ လူတွေရဲ့ တွေးခေါ်၊ ပြုမူပုံတွေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးလို့ပါပဲ။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး၊ နိုင်ငံ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု၊ အစိုးရ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အကြား တန်ဖိုး ထားမှုတွေ မတူညီပါဘူး။ လူတစ်ယောက်က ငွေကြေး ချမ်းသာမှုကို ပိုတန်ဖိုးထားရင်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်မိတာတွေ ရှိတတ်သလို လူသားတွေရဲ့ အသက်တွေ၊ ဘ၀တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေကို တန်ဖိုးထားတဲ့ အစိုးရများက နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍတွေမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ်ကို များများ သုံးစွဲလေ့ ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍနဲ့ ပတ်သက်ရဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေဟာ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ဘယ်လို နားလည်သလဲ၊ ကျန်းမာရေး တိုးတက်မှုအတွက် ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်မလဲ၊ ကျန်းမာရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို ဘယ်လို ချမှတ်သလဲ၊ ရည်မှန်းချက် ပြည့်မီစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်သလဲ စတာတွေ အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို တာဝန် ယူနေသူတွေ ဘက်မှ ညီမျှမှု၊ တန်းတူရည်တူ ရှိမှု၊ တရားမျှတမှု၊ ကာကွယ်ရေး၊ အန္တရာယ် ကင်းဝေးရေး၊ ဆုံးဖြတ် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အားပေး ကူညီရေးစတဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ကလဲ ကျန်းမာရေးဆိုတာ ဖျားနာတာ၊ ရောဂါရှိတာနဲ့တင် မဆိုင်ဘဲ ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ပျော်ရွင်မှုကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ခံစားနိုင်မှုကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ကျန်းမာ၊ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု ရဖို့အတွက် မကျန်းမာမှုတွေကို ဘယ်လို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သင့်တယ်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် အစားအစာ၊ အနေအထိုင်ကို ဘယ်လို ရွေးချယ် စားသောက်၊ နေထိုင်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး အသိပညာကို တန်ဖိုးထားမှု လိုအပ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ် ဆိုရရင် ကျန်းမာရေးဆိုတာ လာဘ်ကြီး တစ်ပါး ဖြစ်တာကြောင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တစ်ဦးချင်း တာဝန်၊ အစုအဖွဲ့ တာဝန်တွေမှာ ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရင်း ပြည်သူမှ ပြည်သူသို့ အသိပညာပေးခြင်း နည်းလမ်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ဖို့ အလွန်ပဲ အရေးကြီးပါကြောင်းနဲ့ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ပြည်သူလူထုကကော၊ ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေကပါ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးရာ၊ နည်းပညာ ရေးရာ၊လူ့စွမ်းအား ရေးရာ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြ တောင်းဆိုဖို့ လိုအပ်လှပါကြောင်း ရေးသား တင်ပြအပ်ပါတယ်။
ခင်မမမျိုး (၂၅၊ ၈၊ ၂၀၀၉)
Adams, L., Amos, M. and Munro, J. (eds) (2002) Promoting Health: Politics and Practice, London, Sage
Crawford, R. (1980) 'Healthism and the medicalization of everyday life', International Journal of Health Services, 10 (3), pp. 365-88
Earl, S. (2007) ' promoting public health: exploring the issues' in Lloyd, C (eds) Theory and Research in promoting public health, London, Sage
Plant, R. (1988) 'Citizenship, rights, welfare' in Franklin, J. (ed) Social Policy and Social Justice: The IPPR Reader, Cambridge, Polity, pp. 57-72
Seedhouse, D. (1986) Health: The foundations for achievement, Chichester, Wiley
World Health Organization (WHO) (1998) Health 21: Health for All in the 21st century, Copenhagen, WHO
World Health Organization (WHO) (2005) Health is key to Sustained Peace and Prosperity in Sudan, 11 April
Posted by Khin Ma Ma Myo 1 comments
သင် မျက်စိအား ကောင်းချင်ပါသလား။ Reader’s Digest မှာ ပါဝင်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေကို သုံးပြီး မျက်စိ အစွမ်းကို မြှင့်တင်လို့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မျက်စိဟာ အလင်းရောင်ကို ကောင်းမွန်စွာ မြင်တွေ့ရဖို့အတွက် အထူးသဖြင့် ညဘက်မှာ ကောင်းကောင်း တွေ့ဖို့ အတွက် Vitamin A ဓာတ် လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Vitamin A ပါဝင်တဲ့ မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ ငါးနဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်းတွေကို များများ စားသုံးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Vitamin A တွေ အများကြီး ရချင်ဇောနဲ့ အထက်က အစားအသောက်တွေကိုတော့ မစားဘဲ အားဆေးတွေကို အများကြီး သောက်ခြင်းမှလည်း ရှောင်ကြဉ် သင့်ပါတယ်။ တန်ဆေး လွန်ဘေးပါ။
Vitamin Cနဲ့ Vitamin E တို့ဟာ လူအတော်များများသိကြတဲ့ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ English လို Anti oxidant ပေါ့။ အဲဒီ ဓာတ်တွေက မျက်စိမျာ အသက်ကြီးလာလို့ တိမ်စွဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ အပြင်တိမ် ရောဂါ ရှိနေရင်တောင် ရောဂါကို ပိုပြီး မဆိုးသွားအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Vitamin C တွေ ပါဝင်တဲ့ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးတွေ ဥပမာ လိမ္မော်သီး နဲ့ Vitamin E တွေ ပါဝင်တဲ့ မြေပဲစေ့နှင့် တခြား အစေ့အဆံတွေကို များများ စားသုံး ပေးသင့်ပါတယ်။
Luteinနဲ့ Zeaxanthin ဓာတ်တွေဟာ မျက်ကြည်လွှာတွင် ပါဝင်ပြီး မျက်စိကို ထိခိုက်နိုင်သည့် ဓာတ်ရောင်ခြည်များကို ကာကွယ်ပေးကြသည့် ဓာတ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ Lutein ဓာတ်ဟာ အစိမ်းရင့်ရောင် ရှိတဲ့ အသီးအရွက်တွေနဲ့ ကြက်ဥ အနှစ်တွေမှာ ပါဝင်ပြီး Zeaxanthin ဓာတ်ကတော့ ပဲသီးစိမ်း နဲ့ ပြောင်း တို့မှာ ပါဝင်ကြပါသည်။ အဆိုပါ အစားအစာများကိုလည်း များများ မှီဝဲသင့်ပါတယ်။
Zinc လို့ ခေါ်တဲ့ ဇင့် ဓာတ်ဟာ အသက်ကြီးလာလို့ မျက်စိ ယိုယွင်းပျက်စီးတာကို နှေးကွေးစေပါတယ်။ Zinc ဓာတ်ဟာ ပင်လယ်စာနဲ့ အသားတွေ ပဲတွေမှာ ပါဝင်တတ်ပါတယ်။
Reader’s Digest မှာ ပါဝင်လို့သာ ဖော်ပြလိုက်ရတာပါ။ တကယ်တော့ အထက်ပါ ဓာတ်တွေဟာ မြန်မာ့ရိုးရာ အစားအသောက်တွေမှာ အဓိက ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် စားသောက်ဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။ တောနယ်တွင် နေထိုင်သော ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြဿနာ မရှိပေမယ့် မြို့ပြတွင် နေထိုင်ကြတဲ့ မိဘတွေအနေနဲ့ မိမိတို့၏ ကလေးများစားသုံးနေကြတဲ့ အစားအသောက်တွေထဲမှာ အထက်ပါ အမျိုးအစားတွေ ပါဝင်အောင် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ ကလေးက ပူဆာတိုင်း နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ Junk food တွေကို ကျွေးမည့်အစား မျက်စိကို အားအင် ပြည့်ဖြိုးစေသော အထက်ပါ အစားအသောက်များကို ဦးစားပေး ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များ အနေဖြင့် မျက်စိကို အားကောင်းစေသော အစားအသောက်များကို စားကြခြင်းဖြင့် မျက်စိကို အဆမတန် အသုံးပြုပြီး အလုပ်လုပ်ရသော ယနေ့ခေတ်ကြီးတွင် အရွယ် မတိုင်မီ အမြင် အာရုံ ပျက်စီး ယိုယွင်းခြင်းမှ ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ziwakka4comments
(ဘီ)ပိုးဆိုတာ Hepatitis B virus (HBV) ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ခေါ်ကြတာပါ။ သူ့ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ Hepatitis B ဟာ အဖြစ်များတဲ့ အသည်း ကူးစက်ရောဂါ အပြင်းစား ဖြစ်တယ်။ သမိုင်းကြောင်းပါ ပြောရရင် သီပေါမင်း ပါတော်မူတဲ့ ၁၈၈၅ ခုနှစ်ကစပြီး ကပ်ရောဂါ အသွင် စဖြစ်ခဲ့ပါသတဲ့။ ပိုးက သွေးထဲကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရောက်လာပြီး ကိုယ်ထဲက အရည်တွေထဲထိ ၀င်လာတာ ဖြစ်တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုရင် ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒီထဲက ၇ ယောက်မှာ ၁ ယောက်က နာတာရှည် အဆင့် ရှိနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “နူရာ ၀ဲစွဲ” ဆိုသလို ဆင်းရဲကြတဲ့ အာရှ၊ အာဖရိကနဲ့ တောင်အမေရိကမှာ ပိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ် ကူးပါသလဲ မေးရင် AIDS နဲ့ အတူတူပါဘဲ။ သွေးသွင်းတာ၊ သွေး-သွေးချင်းထိတာ (သွေးကိုကိုင်ရင် Latex or plastic လက်အိတ် မသုံးတာ)၊ ပိုးသန့် မထားတဲ့ ဆေးထိုးအပ်သုံးတာ၊ အကာကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာ (ကွန်ဒွန် မသုံးတာ)၊ ရောဂါရှိတဲ့ မိခင်ကနေ မွေးလာတဲ့ ကလေးဆီ ကူးတာတွေ ဖြစ်တယ်။ သတိထား စေချင်တာက သွေးသာ မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ်မှာရှိတဲ့ အရည်တွေထဲမှာလဲ ပိုးရှိနေမှာမို့ လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ကူးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ပြောရရင် နားကပ် လဲဝတ်တာ၊ နုတ်ခမ်းမွှေးရိတ်တဲ့ဒါး၊ သွားတိုက်တံ၊ လက်သဲညှပ် တွဲသုံးတာ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်၊ အလှပြင်ဆိုင်က တစ်ခါသုံးဒါး မသုံးရင်လဲ ကူးနိုင်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှု ရှိချင်လွန်းလို့ (တက်တူး) အရုပ် ထိုးသူတွေ၊ ဟိုနေရာ ဒီနေရာ ကွင်းတပ်သူတွေ အန္တရာယ်ကို မြင်စေချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အစိုးရိမ် မလွန်ပါနဲ့။ ပိုးရှိနေသူက ချက်ပြုတ်တာ စားမိလို့ မကူးပါ။ လက်တွဲ လမ်းလျောက်လဲ မကူးပါ၊ နှာခြေ၊ ချောင်ဆိုးတာနဲ့ မကူးပါ။ တစ်အိမ်တည်း အတူနေရုံနဲ့လဲ မကူးပါခင်ဗျား။
ဒီပိုး ၀င်လာရင် တခြားပိုးတွေ ၀င်လာတဲ့အခါ လုပ်သလို ခန္ဓာကိုယ်က ခံပြီး တိုက်ထုတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က နိုင်ရင် ပြီးပြီး ပျောက်ပျောက် ဖြစ်သွားရော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ (အင်တီဘော်ဒီ) လို့ခေါ်တဲ့ ခံနိုင်စွမ်း (နားလည် လွယ်အောင် ပြောရရင် အတွင်းအား ပေါ့ဗျာ) ရလာလို့ပါ။ နောက်ထပ် (ဘီ)ပိုး ၀င်လာတဲ့အခါ ဒီခံနိုင်စွမ်းကနေ ပြန်တိုက် ပစ်ပါမယ်။
၀တ္ထု ဇာတ်ကြောင်း ရေးသလို တက်လိုက် ကျလိုက် ပြောပြရတော့မှာဘဲ။ ၆ လကြာလို့ မနိုင်ရင်တော့ နာတာရှည် အသည်း ရောဂါ ဖြစ်ပါပြီ။ စိတ်သက်သာရဖို့ တစ်ခုကတော့ ၉၀% သော ကျန်းမာတဲ့ လူကြီးတွေဟာ နာတာရှည် ဖြစ်မသွားကြပါဘူး။ ကလေးတွေက ကံမကောင်းကြပါ။ ငယ်လေ မခံနိုင်လေ၊ သိပ်ငယ်လို့ကတော့ ၉၀% မခံနိုင်ကြပါ။ နာတာရှည် ဖြစ်တိုင်းလဲ လူက လူကောင်းလို အကြာကြီး နေနိုင်ပါတယ်။ နေနိုင်တယ်ဆိုပြီး ပေါ့လို့တော့ မရပါ။ ရောဂါ လက္ခဏာသာ မရှိတာ၊ ပိုးက အသည်းကို တစစနဲ့ ဖျက်ဆီးနေပါပြီ။
သူ့ကြောင့် အသည်းခြောက်ရောဂါ၊ ဒါမှမဟုတ် အသည်း ကင်ဆာ ဆက်ဖြစ်တတ်လို့ ဆိုးလွန်းပါတယ်။ အသည်းက လိုသလောက် မလုပ်နိုင်တော့ချိန် ရောက်ရင်တော့ သေရတော့မှာပါ။
အသည်းဆိုတာ အတော် အလုပ်လုပ်တဲ့ အင်္ဂါ ဖြစ်ပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့ အစာထဲက အဆီ နဲ့ ဆီတွေကို အစာခြေ ပေးတယ်။ ဒီလို လုပ်နိုင်ဖို့ (ဘိုင်းလ်) အစာခြေ အရည် ထုတ်ပေးတယ်။ စိမ်းစိမ်း၊ နက်နက်၊ ခါးခါး အရည်ကို ပြောတာပါ။ တစ်နေ့တာ ရတာနဲ့ သုံးတာထဲက ပိုတဲ့ အား(အင်နာဂျီ)ကို သိုလှောင် ပေးထားတယ်။ အဆိပ် အတောက် ပါလာရင်လဲ ဖယ်ရှားပေးတယ်။ နောက်ပြီး (ကိုလက်စတီရော)၊ သွေးခဲ စေတဲ့ ပစ္စည်း၊ ပရိုတင်းတွေကို သူကနေ ထုတ်လုပ်ပေး ပါသေးတယ်။ ဒီလို များလွန်းတဲ့ အလုပ်တွေ ၂ ရက်လောက် အလုပ် မလုပ်တော့ရင် လူဟာ သေရတော့မှာပါ။ ဇာတ်နာပြီ ပေါ့ဗျာ။
(ဘီ)ပိုး စ၀င်လာချိန်မှာ တုပ်ကွေးလိုဘဲ နဲနဲဖျား၊ ကိုက်ခဲ၊ အစာမစားချင် ဆိုတာလောက်သာ ခံစားရပါတယ်။ ရှာရှားပါးပါး ဆိုပါစို့ ၁% လောက်သာ မျက်စိဝါ၊ ဆီးဝါ၊ အန်ချင် ဆိုတဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်း ခံစားရတတ်ပါတယ်။ သတိထားရတော့မဲ့ နာတာရှည်အဆင့် ရောက်ရင် စောစောက က္ခဏာတွေ မရှိတော့ပါ။ မပေါ့ပါနဲ့။
သွေးစစ်ရင် အဖြေ ၃ မျိုးထွက်နိုင်ပါတယ်။
HBsAb တွေ့ရင် ဒီလူ ကံကောင်းတယ်။ ခံနိုင်အားရှိနေပြီ။ သူများကိုလဲ မကူး၊ ကာကွယ်ဆေးလဲ မလိုဘူး။
HBsAg တွေ့ရင် သွေးထဲမှာ ပိုးရှိနေပြီ။ ၆ လကြာရင် တခါထပ်စစ်ပါ။ ရောဂါပြီးသွားတာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
HBcAb တွေ့တယ် ဆိုရင်တော့ ကူးစက်ခံနေရပြီမို့ အသဲအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ရပါတော့မယ်။
ဆရာဝန်ဆီ ရောက်ပြန်တော့ တချို့က ဆေးကုပေးဖို့ မလိုပါ။ ၆ လ တစ်ခါ ၁ နှစ်တစ်ခါ ပြန်ပြပါ။ ရိုးရိုးသားသား ပြောရရင် ပျောက်သွားအောင် ကုတဲ့ဆေး မရှိသေးပါ။ ဆရာဝန်က အနားခိုင်းပါမယ်။ အစာ ကောင်းကောင်း စားခိုင်းမယ်။ ရေများများ သောက်ခိုင်းမယ်။ ဆေးလိပ်၊ အရက်ဖြတ်ခိုင်းမယ်။ တခြား နေမကောင်းထိုင်မသာ ဖြစ်ရင် သောက်ရမဲ့ ဆေးကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးမှ သောက်ဖို့ သင့်ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ဆေးမှန်သမျှ တိုင်းရင်းဆေး ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းကျိုး ဆိုတာ ရှိတယ်။ မကောင်းတာ မှန်သမျှ ခြေဖျက်ပေးမဲ့ အသည်းက မကောင်းဘူး မဟုတ်ပါလား။
(အေ) ကာကွယ်ဆေး ထိုင်းခိုင်းချင် ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ (အေ)ရော (ဘီ)ပါ ရောထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေး (Twinrix) လဲ ရှိနေပါပြီ။ အရက်က လွဲလို့ အထူး ရှောင်ရန် ဆောင်ရန် မရှိပါ။ အာဟာရ ပြည့်ပြီး မျှတတဲ့ အစာ ကောင်းကောင်း စားသင့်ပါတယ်။ အဆီ နည်းရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အဆီချက်မဲ့ စက်က ပျက်နေတယ် မဟုတ်လား။
(ဘီ)ပိုးဟာ HIV ထက် အဆ ၁၀၀ ပိုပြီး ကူးစက်တတ်လို့ သိထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကာကွယ်ဆေးကို အားကိုးကြပါ။ ကာကွယ်ဆေးကို ၃ ကြိမ် ၃ ခါတိတိ ထိုးရပါမယ်။ ပထမ တစ်ခါ ထိုးပြီး နောက် ၁ လမှာ ဒုတိယ၊ နောက် ၅ လ မှာ တတိယ။
မွေးစကနေ အသက် ၁၈ နှစ် အောက်တွေကို ကာကွယ်ဆေး သေချာပေါက် ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။ လူကြီးတွေထဲက ဆိုရင် ဆေးရုံ-ဆေးခန်းမှာ အလုပ်လုပ်သူတွေ၊ ထောင်မှာ အလုပ်လုပ်သူနဲ့ ထောင်ကျသူတွေ၊ မူးယစ်ထိုးဆေး သုံးသူတွေ၊ လိင်တူ ဆက်ဆံသူတွေ၊ ကျား-မ ဆက်ဆံဘက်များသူတွေ၊ ခန္ဓာကိုယ်ရင်းပြီး လုပ်ကိုင်ရသူတွေ၊ မိသားစုအတူနေထဲက တစ်ယောက် ယောက်မှာ ပိုးရှိနေရင်၊ ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်က ပိုးရှိနေရင် ကလေးကို မွေးပြီးပြီးချင်း ကာကွယ်ဆေးနဲ့ HBIG ဆိုတဲ့ဆေး ထိုးပါလေ။ ပိုးဝင်ပြီး သူများကတော့ ကာကွယ်ဆေး မလိုတော့ပါ။ မထူးလို့ပါ။
(ဘီ)ပိုး ရှိသူကို ဆေးပေးတာဟာ အသည်းခြောက်တာနဲ့ ကင်ဆာ အဆင့် ရောက်မသွားဖို့သာ ရည်ရွယ်နိုင်တာပါ။ WHO အဆို အရတော့ Interferon နဲ့ Anti-viral Agents ဆေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဈေးကတော့ ခေါင်ခိုက်နေဆဲပါ။
ကင်ဆာကတော့ ရောဂါနာမည် တပ်ပြီး ၆ လ ထက် အသက် မရှည်ပါ။ အသည်း ခြောက်တာဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး ဆရာန်များ လုပ်ပေးနိုင်တာက Liver transplantation အသည်း အစားထိုး ပေးတာပါဘဲ။ သိတဲ့အတိုင်း ဒီအဆင့်ဟာ အင်မတန် ကရိကထများ၊ ငွေကုန်ကြေးကျများ၊ ရာသက်ပန် လူနာကြီးဘ၀ကို ရောက်သွားရတာမျိုးပါ။
Posted by Dr. Tint Swe 17 comments
Labels: Communicable disease, Hepatitis, Hepatitis B
နှာခေါင်း ရောဂါ အမျိုးမျိုး သို့မဟုတ် (ကိုရီးယား)က လာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း
မမြင်ရ-မစမ်းရဘဲ မေးတာကို ရောဂါ နာမည် တပ်ပြီး၊ ဆေးနည်း ပေးရတာကို မှန်းကုလို့ ခေါ်ကြ ပေတော့ဗျာ။
လူ့မျက်နှာ နှာခေါင်း တစ်ဝိုက်မှာ (နဖူးရိုး၊ နားထင်ရိုး၊ မျက်ကွင်းအပြင်ရိုး နဲ့ ပါးရိုး၊) အရိုးတွေ ထဲမယ် အကျိအချွဲ နံရံတွေ ရှိတဲ့ လေခိုအိတ် (ဆိုင်းနပ်စ်) စုစုပေါင်း ဘယ်-ညာ လေးစုံ ရှိပါတယ်။ တစ်ခု တစ်ခုဟာ မီးခြစ်ပုံး အရွယ်လောက် ရှိတယ်။
နှာခေါင်း ရောဂါ အမျိုးမျိုးကို စာရင်း ချလိုက်ရင် ဒီလို တွေ့ရပါမယ်။
၁။ ဆေး တစ်ခုခုနဲ့ မတည့်လို့ ဖြစ်ရတဲ့ (အလာဂျီ) ဖြစ်ခြင်း၊ Drug Allergy
၂။ ရက်တို-ရက်ရှည် (ဆိုင်နူဆိုက်တစ်) မျက်ကွင်း အပြင်ဘက် ရိုးရောင်ခြင်း၊ Acute or Chronic Sinusitis (Ethmoiditis)
၃။ နာတာရှည် (ဆိုင်နူဆိုက်တစ်) နဖူးထဲက ရိုးရောင်ခြင်း၊ Chronic Frontal Sinusitis (Chronic Rhinosinusitis)
၄။ နှာခေါင်း သွေးယိုခြင်း၊ Epistaxis
၅။ နှာခေါင်းထဲ တခြား ပစ္စည်း ၀င်ခြင်း၊ Foreign Body in the Nose
၆။ နှာခေါင်းပေါက်နှစ်ခုကို ပိုင်းခြားထားတဲ့ အကန့် သွေးယိုခြင်း၊ Hematoma of the Nasal Septum
၇။ နှာခေါင်းထဲ အသားပို ဖြစ်ခြင်း၊ (Nasal Polyps)
ဒီစာမှာ ပထမ ၃ မျိုး အကြောင်းကိုပဲ ရေးပါရစေ။ (အလာဂျီ)ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ (ဆိုင်းနပ်စ်) ရောဂါက နှာရည်တွေ ယို၊ နှာခြေ၊ အနေအထိုင်ခက် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကုသဖို့ (အင်တီ-ဟစ်တမင်း) ဆေး Antihistamines (Diphenhydramine, Loratadine, Fexofendadine)၊ နှာရည်ကျဲဆေး Decongestants (Pseudoephedrine)၊ နှာခေါင်းထဲ ထည့်ရတဲ့ (ကော်တီကို-စတီရွိုက်)ဆေး Nasal corticosteroids (Fluticasone, Beclomethasone) တွေကို သုံးရပါတယ်။
နောက်ပြီး (အလာဂျီ) ဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို ယဉ်ပါးအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ (Allergy desensitization) လုပ်သင့် ပါတယ်။ ဒါမှ နောင် ရှောင်နိုင်မှာပါ။ ဆားရည်ဖြင့် စိမ်ခြင်း၊ (Saltwater rinses) ဆိုတာ ကိရိယာ ၀ယ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေကျက်အေး ၁ ခွက်ထဲမှာ အိမ်သုံးဆား (အိုင်အိုဒင်း မပါ) လက်ဘက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်၊ မုံ့ဖုတ်ရာမှာ သုံးတဲ့ ဆိုဒါမှုန့် နည်းနည်း ထည့်ရပါမယ်။ ဆိုဒါမှုန့်က အပူ မလောင်အောင် ကာကွယ် ရုံပါ။ Vaporizers ခေါ်တဲ့ ရေနွေးငွေ့ရှူတဲ့ နည်းလဲ ကောင်းပါတယ်။ ရိုးရိုးလေးပါ။ ရေကို ပွက်အောင် လုပ်ပေးပြီး ထွက်လာတဲ့ အငွေ့ကို ရှူပေးရတာပါ။ လျှပ်စစ် ရှိလို့ ကိရိယာ ၀ယ်သုံးရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဈေးလဲ မကြီးပါဘူး။
လူတွေအများဆုံး ဖြစ်တတ်တဲ့ ထိပ်ကပ်နာ ခေါ်တဲ့ (ဆိုင်းနပ်စ်)ရောဂါက ဘယ့်လောက်အဖြစ် များသလဲဆိုရင် ဗမာတွေ စွဲနေကြတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲက ကိုရီးယန်းတွေ လေးယောက်မှာ သုံးယောက် ဖြစ်နေသတဲ့။ အစကတော့ အအေးမိတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ နဲနဲလေး ကိုယ်ပူ၊ နှာချေ၊ နှာစေး၊ နှာပိတ်၊ ချောင်းလေးဆိုး၊ အားယုတ်၊ မစားချင် မသောက်ချင်ဖြစ်။ ကြာတော့ နှာခေါင်းနောက်ပိုင်းမှာ အဆက်မပြတ် Drip သွင်းပေးသလို အရည်တွေ စီးကျနေပါမယ်။
ပိုးဝင်တာအပြင် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကြောင့်လည်း ဖြစ်ရပါတယ်။ လေခိုအိတ် ကလေးတွေထဲမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်အောင် သေးငယ်တဲ့ လက်ချောင်းပုံ အမွှေးလေးတွေက ပြင်ပက၀င်လာမဲ့ မသင့်တဲ့ အရာမှန်သမျှကို တားဆီး ပေးပါတယ်။ ရောဂါ ရရင် အဲဒီအလုပ် မလုပ်နိုင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗက်တီးရီးယားတွေ ခိုအောင်း၊ ပေါက်ဖွားပြီး ရောဂါ ရတော့တာပါဘဲ။
ကုသဖို့ကတော့ ပဋ္ဋိဇီဝဆေး Antibiotics (Amoxicillin & Clavulanic acid = Augmentin ES-600, Augmentin, Augmentin XR) ကို ၁၀-၁၄ ရက်ကြာ ပေးရပါတယ်။ နှာရည်ကျဲဆေး Decongestants တွေကို ဆက်သုံးနိုင်တယ်။
(၂-၃)လထက် ကြာကြာဖြစ်ရင်တော့ နာတာရှည်လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ နှာခေါင်းမှာ နေမထိ ထိုင်မထိ၊ မသက်မသာ ဖြစ်မယ်၊ နှာရည် ယိုမယ်၊ နှာရည် အရောင် ရှိလာမယ်၊ မျက်နှာမှာ နာနေမယ်၊ ကိုက်မယ်၊ ကြာရင် ချောင်းဆိုးပါမယ်၊ (ညအချိန် ပိုဆိုးတယ်)။ ပြည်လိုလဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ နှာရည်က နံလာမယ်။ မွှေးတာ၊ နံတာ မသိ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပါးစပ်နဲ့သာ အသက်ရှူ ရတော့မယ်။ အိပ်ရင် ဟောက်မယ်။ ကလေးများ ဖြစ်ရင် နားရောဂါ ဆိုတာ မကြာမကြာ ရမယ်။ ရက်ကြာကြာနဲ့ ခဏခဏ ဖြစ်ခြင်းတာမို့ အလုပ်အကိုင်ပျက်၊ စိတ်ပျက် ဖြစ်ပြီး စီးပွါးရေးပါ ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဒီရောဂါ ဟုတ်-မဟုတ် ရောဂါ ရာဇ၀င်ဖြစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ၊ ရောဂါ လက္ခဏာတွေ၊ သောက်ထားတဲ့ဆေး ဆိုတာတွေ သိဖို့ လိုပါတယ်။ လိုအပ်ရင် Endoscopy နှာခေါင်းထဲ ကိရိယာနဲ့ ကြည့်မယ်၊ X-ray ဓါတ်မှန် ရိုက်တာ၊ နောက်ဆုံး လိုအပ်ရင် CT (Computed tomography) scan ကွန်ပြူတာ သုံးပြီး စစ်ဆေးတာ လုပ်ရပါမယ်။
ကာကွယ်ဖို့ကတော့ အေးချမ်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖြစ်နိုင်သ၍ ရှောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ (ထိပ်ကပ် ရောဂါကြောင့် အေးတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ် သွားလုပ်နေသူများ အိပ်ကပ် ပြဿနာ မရှိရင်တော့ ကိုယ့်ပြည်ကိုယ် ပြန်လာပေါ့။) လေကိုလဲ ရေဓါတ် ရှိနေအောင် လုပ်ပေးနိုင်တာ ကောင်းတယ်။ (Respiratory Humidifiers, Electrode Humidifiers, Resistance Humidifiers, Gas-Fired Steam Humidifiers, Whole House Humidifiers) ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီတွေက ကြော်ငြာတာတွေရှိပါတယ်။ အခန်းကို အနံ့အသက်တွေလဲ ကင်းရှင်းအောင် လုပ်ပါ။
နာတာရှည် ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဆေးကုသရာမှာလဲ သာမန်ကာ ရှံကာ မဟုတ်ဘဲ အပြင်းအထန်နည်း Aggressive treatment သုံးသင့်ပါတယ်။
နှာခေါင်း ပုံပန်းပျက် နေသူတွေကိုတော့ ခွဲစိတ်ပေးဖို့ လိုမယ်။ နောက်ပြီး နှာခေါင်းထဲ ထည့်ရတဲ့ (ကော်တီကို စတီရွိုက်) ဆေးတွေ ပေးရမယ်။ ဆားရည်နဲ့ စိမ်နည်း သုံးရမယ်။
ဆေးမကုဘဲ ထားရင် ရောဂါပိုးက အတွင်းထဲ၊ အရိုးထဲ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ နဖူးထဲက လေခိုပေါက်မှာ ဖြစ်တာ ဆိုရင် မျက်လုံးကို သွားဖိနေလို့၊ အရုပ် နှစ်ထပ် မြင်ရမယ်။ နဖူး ဖေါင်းလာမယ်။ ဦးနှောက်ထဲ အနာ ဖြစ်မယ်။ ဦးနှောက် မြှေးရောင်မယ်။ မျက်ကွင်း ဘေးက ဖြစ်ရင် အနား တစ်ဝိုက် ပြည်တည်နာ Abscess ဖြစ်မယ်။ ပါရိုးထဲ ဆိုရင် နှာခေါင်း ပိတ်နေမယ်။ နားထင်ရိုးထဲ ဖြစ်ရင် အရုပ်နှစ်ထပ် မြင်တာ၊ မျက်လုံးရွေ့လျားမှု ကောင်းကောင်း လုပ်မရတာ ဖြစ်နေမယ်။ အထဲ ဆက်ဝင်သွား ရင်တော့ ဦးနှောက်ထဲ အနာ ဖြစ်မယ်။ ဦးနှောက်မြှေး ရောင်မယ်။
နာတာရှည် (ဗက်တီးရီးယား)ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ (ဆိုင်းနပ်စ်) ရောဂါကို ကုသဘို့ ပဋ္ဋိဇီဝဆေးများ Antibiotics (Amoxicillin & Clavulanic acid = Augmentin ES-600, Augmentin, Augmentin XR)၊ နှာရည်ကျဲ ဆေးများ Decongestants (Pseudoephedrine = Chlor Trimeton, Contac Cold, Drixoral Decongestant Non-Drowsy, Elixsure Decongestant, Entex, Genaphed, Kid Kare Drops, Nasofed, Seudotabs, Silfedrine, Sudafed, Sudodrin, SudoGest, Suphedrin, Triaminic Softchews Allergy Congestion, Unifed)၊ ဆားရည်ဖြင့် စိမ်ခြင်း၊ (Saltwater rinses)၊ နှာခေါင်းထဲ ထည့်ရသည့် (ကော်တီကိုစတီရွိုက်) ဆေးများ topical nasal corticosteroids (fluticasone or beclomethasone) သုံးရပါလိမ့်မယ်။
နှာခေါင်းရိုး အနေအထား ပုံမှန် မဟုတ် သူများအား ခွဲစိတ် ပေးရပါမယ်။ (ရောဂ)နည်းနဲ့လဲ ကုသပေး နိုင်ပါတယ်။
(အက်သမွိုက်)လေခိုအိတ်များ ရောင်ခြင်း Ethmoiditis ကတော့ အသက်ရှူလမ်း အထက်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်းက တစ်ဆင့် ဆက် ဖြစ်ရတာပါ၊ (ဗက်တီးရီးယား) ဒါမှမဟုတ် (ဗိုင်းရပ်စ်)ပိုးဟာ လေခိုအိတ်ရဲ့ နံရံတွေကို ပျက်စီးစေတယ်။ (အလာဂျီ) ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူများကို မကူးပါ။ နှာခေါင်းရိုး အနေအထား ပုံမမှန်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အားနည်းနေသူ ဆိုရင် (ဖန်းဂတ်စ်) မှိုကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဖန်းဂတ်စ်) မှိုကြောင့် ဖြစ်တာ ဆိုရင် (ဖန်းဂတ်စ်)ဆေး Amphotrecin B အကြောဆေး ပေးရပါမယ်။
လက္ခဏာတွေကတော့ နဖူး အောက်နား၊ မျက်လုံး နှစ်ဖက်ကြား၊ နှာခေါင်းရဲ့ဘေးမှာ နာမယ်။ မျက်စိ အစွန်နား အနည်းငယ် နီပြီး ရောင်မယ်၊ နာနေမယ်။ နှာခေါင်းကနေ အသက်ရှူရတာ ခက်မယ်။ ဖျားနိုင်တယ်။ အနံ့ ကောင်းကောင်း မရ ဖြစ်မယ်။ နှာခေါင်း ပိတ်နေမယ်။ နှာရည်ယိုမယ်။
ဆက်ပြန့် မသွားအောင် တားဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှာရည်ကို သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ ရေ-အရည် များများ သောက်ပေးခြင်း၊ ဆားရည် စိမ်ပေးခြင်း၊ နွားနို့ ရှောင်ခြင်းတို့က သက်သာစေပါမယ်။ (အလာဂျီ)ကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဆိုရင် ဖြစ်စေတတ်တဲ့ အခြေအနေကို ရှောင်ပါ။ နှာခေါင်းထဲ ထည့်ရတဲ့ (ကော်တီကို-စတီရွိုက်)ဆေးတွေ သုံးပါ။ (အင်တီ-ဟစ်တမင်း)ဆေး Antihistamines (Diphenhydramine, Loratadine or Fexofendadine) သုံးပါ၊ နှာရည်ကျဲဆေး Decongestants (pseudoephedrine) သုံးပါ၊ (ဗက်တီးရီးယား)ကြောင့် ဖြစ်ရင် ပဋ္ဋိဇီဝဆေး Antibiotics (Amoxicillin & Clavulanic acid) ပေးပါ၊
(အင်တီဘိုင်ရောတစ်)က မထိရောက်တော့ရင် ခွဲရပါတော့မယ်။ Basic endoscopic surgical procedure ခွဲစိတ် ရတာက မေ့ဆေး ဖြစ်ဖြစ် ထုံဆေး ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ပိတ်ဆို့နေတာတွေ ဖယ်ထုတ်၊ အကောင်းတွေ တတ်နိုင်သမျှ ချန်ပေးရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄ ပါတ် ဆိုရင် ပြန်ကောင်း သွားမှာပါ။
Plan B (Levonorgestrel) Plan B(Levonorgestrel) Plan B (Levonorgestrel)
မျက်စိ ရေတိမ် ရောဂါ ဟာ အမြင် အာရုံ ကြော (Optic Nerve) ကို ထိခိုက် စေတဲ့ ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် ကုသ မရနိုင် တော့တဲ့ မျက်စိ ကွယ်ခြင်း (Irreversible Blindness) ရဲ့ အကြောင်း တစ်ရပ် လည်း ဖြစ်ပါတယ်... ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်း မှာ ရေတိမ် ရောဂါ ကြောင့် မျက်စိ နှစ်ဖက် လုံး ကွယ်သူ ပေါင်း ၆သန်း ခန့် ရှိနေ ပါတယ်... အမေရိက ရဲ့ စစ်တမ်း တစ်ရပ် မှာတော့ အမေရိက မှာ လူဦးရေ ၃သန်း ခန့် ရေတိမ် ရောဂါ ခံစား နေရပြီး အဲဒီ ထဲက တစ်ဝက် လောက်ဟာ မိမိမှာ ရေတိမ် ရောဂါ ရှိမှန်း မသိသူ များ ဖြစ်ကြ ပါတယ်... အကြောင်းမှာ ဖြစ်စ တွင် ရောဂါ လက္ခဏာ မသိသာ ခြင်း၊ မျက်စိ မှုန်ဝါး လာတာ ကို ရေတိမ် ရောဂါ ကြောင့် ဟု မသိ ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်...
မျက်လုံး တွင်းရှိ ရေဖိအား (Intraocular Pressure) အကြောင်း ပထမ အနေနဲ့ ပြောပြ ချင်ပါတယ်... မျက်လုံး တွင်း ရေဖိအား ဟာ ပုံမှန် အားဖြင့် ၈ မှ ၂၂ မီလီမီတာ မာကျူရီ (8 to 22 mmHg) ကြားမှာ ရှိပါတယ်.. ရေဖိအား နည်းရင် မျက်လုံး ပျော့သွား ပြီး ရေဖိအား များလာ ရင် မျက်လုံး မာကျော လာ ပါတယ်.. မျက်လုံး တွင်း အရည် (Aqueous Humor) များကို မျက်ဝန်း (Iris) အနောက်ဖက် နဲ့ မျက်စိ မှန်ဘီလူး (Lens) ဘေးရှိ စီလီယာရီ ဘော်ဒီ (Ciliary body) များက ထုတ်လုပ် ပေးပါတယ်... အဲဒီ ကနေ သူငယ်အိမ် (Pupil) ကို ဖြတ်ကာ မျက်စိ ရှေ့ပိုင်း ရှိ အစိတ် အပိုင်း များ အာဟာရ အတွက် ဖြည့်ဆည်း ပေးပြီး မျက်ကြည်လွှာ (Cornea) နဲ့ မျက်ဝန်း ကြားထောင့် လမ်းကြောင်း (Trabecular Mechwork) မှတစ်ဆင့် စီးဆင်း ထွက် သွားပါတယ်.. အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် လမ်းကြောင်း ပိတ်သွား ခြင်း၊ဒါမှ မဟုတ် အရည် ထုတ်လုပ် မှုများ ခြင်းတို့ ကြောင့် မျက်လုံး တွင်း ရေဖိအား မြင့်တက် လာပြီး ရေတိမ် ရောဂါ လက္ခဏာ များ ဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်... မည်သည့် အတွက် ကြောင့် ရေတိမ် ရောဂါ ဖြစ်ရသည် ကိုမူ ယခုထိ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း မသိ ရသေးပါ.. ဒါပေမယ့် မျိုးရိုး လိုက်ပြီး ဖြစ်တတ် ကြောင်း၊ အနောက် နိုင်ငံ များတွင် လူမည်း များ၌ အဖြစ် များကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါတယ်...
ရေတိမ် ရောဂါ အဓိက အားဖြင့် နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်...
ထောင့်ကျယ် ရေတိမ် (Open-Angle Glaucoma)
ထောင့်ကျဉ်း ရေတိမ် (Closed-Angle Glaucoma)
ထောင့်ကျယ် ရေတိမ် ဟာ အဖြစ် များဆုံး အမျိုး အစား ဖြစ်ပြီး ဖြစ်စမှာ လက္ခဏာ မပြသ ဘဲ အချိန် အတော် ကြာမှသာ လက္ခဏာ များ ပြလာ ပါတယ်... အရည် စီးထွက် ရာ လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် ရပြီး မျက်စိ မှုန်ဝါး လာခြင်း၊ အမြင် အာရုံ ကျဉ်းမြောင်း လာခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာ များ ပြသ လာပါတယ်... ထောင့်ကျဉ်း ရေတိမ် ကတော့ ရုတ်တရက် လက္ခဏာ များ ဖြစ်ပေါ် လာတတ် ပြီး မျက်လုံး နီရဲ လာခြင်း၊ မျက်စိ ကိုက်လာ ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက် ပျို့အန် တတ်ခြင်း၊ အမြင် မှုန်ဝါး ပြီး အလင်းရောင် ကြည့်တဲ့ အခါ ဘေးမှာ အလင်း ကွင်း (Halo) များ မြင်ရ ခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်... ထောင့်ကျဉ်း ရေတိမ် ဟာ မျက်ဝန်း နဲ့ အရည် စီးထွက် ရာလမ်း ကြောင်း တို့ ထိကပ် ပိတ်ဆို့ မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာရ ပါတယ်.. အဆိုပါ ရေတိမ် ရောဂါ များကို အချိန်မီ ကုသမှု မခံယူ ပါက ရေဖိအား များသည့် ဒဏ်ကြောင့် မြင်လွှာ (Retina) ရှိ အမြင် အာရုံ ကြော (Optic Nerve) ထိခိုက် ချိုင့်ဝင် သွားပြီး လုံးဝ မျက်လုံး ကွယ်သွားခြင်း (Permanent Blindness) ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်..
မျက်စိ ရေတိမ် ရှိမရှိ စမ်းသပ် ရန် မျက်စိ အထူးကု ဆရာဝန် မှသာ စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.. မျက်လုံးတွင်း ရေဖိအား တိုင်း ကိရိယာ (Tonometry) ဖြင့် တိုင်းတာခြင်း၊ မျက်စိ စစ်ဆေး ကိရိယာ (Ophthalmoscope) ဖြင့် အမြင် အာရုံ ကြော အခြေ အနေ၊ မျက်လုံး တွင်း အခြေ အနေ များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ မြင်ကွင်း စစ်ဆေး ခြင်း (Visual Field Testing) တို့ဖြင့် ပြလုပ် ကာ ရေတိမ် ရှိမရှိ စစ်ဆေး နိုင်ပါတယ်...
ကုသမှု အနေ ဖြင့် သောက်ဆေး၊ မျက်စဉ်း ခပ်ဆေး၊ ခွဲစိတ် ကုသ ခြင်းနည်း တို့ဖြင့် ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်.. Beta blockers (timolol, levobunolol, metipramolol) စသည့် မျက်စဉ်း ဆေး များမှာ စီလီ ယာရီ ဘော်ဒီ မှ အရည် ထုတ်လုပ် မှုကို လျှော့ချ ပေးပြီး မျက်လုံးတွင်း ရေဖိ အား လျော့ကျ စေပါတယ်.. Adrenergic agonists (Beta2 agonists) အုပ်စု ဆေးများ ဖြစ်တဲ့ (Brimonidine, Apraclonidine, Dipivefrin) ကတော့ အရည် ထုတ်လုပ် မှု ကျဆင်း စေတဲ့ အပြင် အရည် စီးထွက် မှုကို လည်း ဖြစ်ပေါ် စေပါတယ်.. Prostaglandin analogs (Latanoprost, Travoprost, Brimatoprost) မျက်စဉ်း ဆေးများ ကတော့ အရည် စီးထွက် မှုကို ဖြစ် စေတဲ့ ဆေးများ ဖြစ်ပါတယ်.. Carbonic Anhydrase Inhibitors (Acetazolamide, Methazolamide) သောက် ဆေးများ ကတော့ အရည် ထုတ်လုပ် မှုကို လျော့ကျ စေပါတယ်.. Parasympathomimetics (Pilocarpine, Echothiophate) စတဲ့ မျက်စဉ်း ဆေးများ ကတော့ အရည် စီးထွက် မှုကို ဖြစ်စေ ပြီး မျက်စိ သူငယ် အိမ်ကို လည်း ကျဉ်းစေလို့ အရင်က တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးပေ မယ့် အခု တော့ အသုံး နည်းလာ ပါတယ်.. ၎င်း မျက်စဉ်း ဟာ တစ်နေ့ ၃-၄ ကြိမ် ခပ်ပေး ရခြင်း ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး များတာ ကြောင့် အသုံး နည်းလာ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်..
ခွဲစိတ် ကုသ မှု အနေ ဖြင့် ရိုးရိုး ခွဲစိတ် ခြင်း (Trabeculectomy, Viscocanalostomy)၊ လေဆာ ရောင်ခြည် ဖြင့် ခွဲစိတ် နည်းများ (Laser Iridotomy, Laser Trabeculoplasty, Laser Cilioablation) တို့ဖြင့် အရည် စီးထွက် မှု ပွင့်အောင် ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်.. ဒါ့ကြောင့် မျက်စိ ရေတိမ် ရောဂါ ကို ပေါ့ပေါ့ တန်တန် မထား သင့်ပဲ ဂရုစိုက် နေထိုင် ခြင်း၊ မျက်စိ မှုန်ဝါး လာပါက မျက်မှန် လုပ်ရန် အတွက် တစ်ခု တည်းကိုသာ အာရုံ မထားဘဲ တတ်ကျွမ်း သော မျက်စိ အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ စနစ် တကျ စစ်ဆေး ကုသ မှု ခံယူ သင့်ပါ ကြောင်း သတိ ပေးရေး သား လိုက်ရ ပါတယ်.. အားလုံး မျက်စိ ရောဂါ နဲ့ ဘေးဘယာ အပေါင်း မှကင်း ဝေးနိုင် ပါစေ...
ရေတိမ်ရောဂါ ကြောင့် အမြင်ေ၀၀ါး လျော့နည်းလာပုံ
Clotho (ကလိုသို) သည် ရှေးဟောင်း ဂရိ နှင့် ရောမ ဒဏ္ဍာရီ များတွင် ပါသည့် နတ်သမီး တစ်ပါး အမည် ဖြစ်သည်။ ရောမတို့ အဆို အရ (အူရန်နို) နှင့် (ဂီး)တို့၏ သမီး (နိုနို) (နိုနာ)ဟုခေါ်ပြီး၊ ဂရိအလိုအရ (ဇီးယပ်)ဘုရင်ကြီးနှင့် မိဖုရားကြီး (ဿီးမီးစ်)တို့၏ ကံကို စီမံကြကုန်သော သမီးတော် သုံးပါး အနက် အထွေးဆုံး ဖြစ်သည်။ အသက်ရှည်ခြင်း-တိုခြင်းမှာ သူမ၏ အလိုအရ ဖြစ်ရပါသတဲ့။
“အသက်ရှည်စွာ၊ အနာမဲ့ကြောင်း”ဟူသည် ကမ္ဘာဦး အစကပင် လူတို့ ရလို၊ ဖြစ်လိုသည့် အိပ်မက် ဖြစ်ပါသည်။ သိပ္ပံစာရေးဆရာများကလည်း ရေးခဲ့လှပါပြီ။ ဥပမာ (ကွတ်-ဗွန်နဂတ်)၏ နက်ဖြန်-နက်ဖြန်-နက်ဖြန် ၀တ္ထု။ ရှေးဟောင်းဂရိ ၀တ္ထု တစ်ပုဒ်တွင်လည်း (အီယို)နတ်သမီးက (တီသိုနီးယပ်စ်)အား ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး သကာလ၊ (ဇီးယစ်) ဘုရင်ကြီးအား သူ့ချစ်သူကို အသက်မသေသူ အဖြစ် ဖန်ဆင်း ပေးပါရန် လျှောက်ထားလေရာ၊ (ဇီးယစ်)ကလည်း တစ်လုံး တစ်ဝတည်း ပြည့်ဝစေသတည်း လုပ်ပေးပါသတဲ့။ မေ့သွားလိုက်တာ တစ်ခုကတော့ အစဉ်အမြဲ နုပျိုနေအောင် ဆိုတဲ့ဆု မပါလိုက်လို့ (တီသိုနီးယပ်စ်)ဟာ မသေပေမဲ့ အို-အို-အိုပြီးသကာလ နှံကောင်လောက်သာ အသံထွက်နိုင်တဲ့ဘ၀ ရောက်သွား ရပါတော့တယ်။
တကယ်တမ်း အသက်ရှည်ဖို့ အရေး အတော်ကြီး ဝေးပါသေးသည်။ ကြွက်များတွင် စမ်းသပ်ချက်အရ (ကလိုသို) မျိုးဗီဇသည် ကယ်လ်စီယံ၏ အလုပ်များကို သက်ရောက်စေပြီး၊ (ကလိုသို) မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲ သွားခြင်းကြောင့် ကြွက်မှာ အိုစာသွားရကြောင်း တွေ့ရှိရပေသည်။ ဆက်လက်၍ (ကလိုသို) မျိုးဗီဇသည် ဦးနှောက်၊ ကျောက်ကပ်၊ (ပါရာသိုင်းရွိုက်-ဂလင်း) တို့မှာလည်း ပုံမှန် မဟုတ် ဖြစ်လာကြောင်း တွေ့ရ ပြန်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် (ကလိုသို) မျိုးဗီဇကို ဆွပေးခြင်းဖြင့် အသက်ကြီးခြင်း၏ လက္ခဏာများဖြစ်သော အရိုး အားနည်းလာခြင်း၊ သွေးလွှတ်ကြောများအတွင်း သွေးသွားလာမှု နှေးကွေးလာခြင်း၊ ကြွက်သားများ အားယုတ်လာခြင်းတို့ကို သက်ရောက်စေပေသည်။ (ကလိုသို) ကို ပိုမို တက်ကြွအောင် လုပ်ပေးလိုက်သော ကြွက်သည် သာမန်ကြွက်ထက် အသက် ၂၀% မှ ၃၀% ပိုရှည်သည်ကို တွေ့လာသည်။ ကလေး ရတာတော့ နည်းသွားပါသတဲ့။ နောက်ဆိုးတာ တစ်ခုက (အင်ဆူလင်)ကိုလည်း သက်ရောက်လို့ "ဖိုးသက်ရှည် ဆီးချိုသမား" ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
သို့ရာတွင် (ကလိုသို) အပါအ၀င် Life extension drugs နှင့် Anti-aging drugs တို့မှာ စမ်းသပ်ဆဲ အခြေအနေတွင်သာ ရှိပါသေးသည်။ (အွန်လိုင်း) ကြော်ငြာတွေကတော့ များလှပါဘိ။
လူတွေအသက်ကြီးလာသည်နှင့် (ကလိုသို)လျော့နည်းလာသည်။ (ကလိုသို)သည် သွေးတိုးကို ထိန်းရာတွင် အသုံးချနိုင်ပုံရသည်ကို လတ်တလော သုတေသနပြုချက်အရ သိလာရသည်။ (ကလိုသို)ကို ထိုးဆေးတလုံးထိုးသည်နှင့် သွေးတိုးကို ၃ လခန့်ကြာ ထိန်းထားနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ (ကလိုသို)ကို ဆေးမှုံ့အဖြစ် (ပရိုတင်း)အားဆေးအဖြစ်ပါ ရနိုင်သည်။
Labels: Latest Medical Findings, News
ဒီနေ့က ကမ္ဘာ့ လူသားချင်း စာနာ ကူညီမှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အထိမ်းအမှတ် နေ့ကလေး ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အဲဒီလို ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးရင်း အသက်စွန့် သွားခဲ့ကြရတဲ့ သူတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကမ္ဘာ့ ကုလသမ္မဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးက နှစ်စဉ် ကျင်းပသွားဖို့ စတင် သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။
အဲဒီနေ့ကလေးက ဒီနှစ်မှာမှ စတာမို့ ဒီနေ့က ပထမဆုံးနေ့ပေါ့။
ဘာလို့ ၁၉ရက်နေ့ သြဂုတ်လကို ရွေးချယ်ရသလဲ ဆိုတော့ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ၁၉ရက်နေ့ သြဂုတ်လမှာ အီရတ်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာကုလသမ္မဂ္ဂအဖွဲ့က လုပ်သား ၂၂ နှစ်ဦး ဗုံးဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ အကြောင်းလေးတွေကို အသေးစိတ် သိချင်ရင် ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
Posted by tune3comments
Labels: Anniversary, UN
နိုင်ငံတစ်ခုကို ရောက်နေတဲ့ (ဘလော့ဂ်)ကိုလည်း ဖတ်တဲ့၊ ရောဂါ တစ်ခုခုလည်း ရှိနေတဲ့ မြန်မာ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အမေးကို ဒီလို ဖြေလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကျားလိင်တံမှာ တစ်ခုမက အစုလိုက် နာတဲ့ အနာဆိုရင် genital herpes ရေယုံ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိင်တံ များသာမက စအို နဲ့ တင်ပါး တစ်ဝိုက်မှာလဲ ပေါက်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း တချို့မှာ ကိုယ်နည်းနည်း ပူတတ်တယ်။ များသောအားဖြင့် STI လိင်လမ်းကြောင်း ကတစ်ဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ အဖြစ်များပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ရေယုံဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တာမို့ အတိအကျ ပြောရရင် ဆေးမနိုင်ပါ။ ကုသတာရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဟာ အနေရအထိုင်ရ သက်သာအောင်၊ ဆက်မပွါးအောင်၊ သူများကို မကူးအောင် လုပ်ဖို့ပါ။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်တာ ကောင်းတယ်။ အ၀တ်အစား ၀တ်တာတာင် cotton underwear ကောင်းတယ်။ ဖြစ်နေချိန်မှာ အတူ နေတာ(လိင်ဆက်ဆံတာ) ကို ရှောင်ပါ။
Acyclovir (Zovirax), famciclovir (Famvir), or valacyclovir (Valtrex) တွေဟာ ဗိုင်းရပ်စ် ဆေးတွေပါ။ နာတယ် ဆိုရင် အနာ သက်သာဆေးတွေ ibuprofen (Advil) or acetaminophen (Tylenol) သောက်ရပါမယ်။ သဘာဝ ဆေးနည်း တွေထဲမှာ Red Marine Algae, Vir-L-Lysine, Choraphor, Aviralex, Aeura, H-Balm တွေပါတယ်။ Acyclovir က ဆေးပြား၊ ဆေးတောင့်၊ ဆေးရည်ရှိတယ်။ တစ်နေ့ကို ၂-၅ ကြိမ်နဲ့ ၅-၁၀ ရက် သောက်ရတယ်။ လိင်လမ်းမှာ ဖြစ်တာမျိုးကိုတော့ ၁ နှစ် အထိ ပေးရတာလဲ ရှိတယ်။
၂။ အနာက မုံလာပွင့်လို သဏ္ဍာန်ဆိုရင် ကြွက်နို့ ဖြစ်မယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ပိုး ထပ်ဝင်တာ မရှိသ၍ မနာပါ။ နည်းနည်းယားတာ ပူတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ အရည် ထွက်တာမျိုးလဲ ရှိနိုင်တယ်။ ကြွက်နို့ ကုဖို့ သတ်သတ် ရေးထားပါတယ်။
၃။ ကျားလိင်တံမှာ တစ်ခုတည်းသော အနာ(အဖု) ဆိုရင် syphilis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မနာတဲ့ အနာကို chancre လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအနာနဲ့ တွဲပြီး ပေါင်ခြံမှာ အကြိတ် ထွက်လာပါမယ်။ ဒီအနာ၊ အကြိတ်တွေက ၃-၆ ပါတ်လောက်နေလို့ သူ့အလိုလို ပျောက်သွားတာဟာ ပိုးကင်းသွားတာ မဟုတ်ပါ။ သွေးစစ်ရင် VDRL ဆိုတာလုပ်ရလို့ + ဖြစ်ရင် syphilis ရှိတယ်လို့ ခေါ်တယ်။
ှSyphilis ကို ဘာလက္ခဏာမှ မပေါ်ဘဲ သွေးစစ်လို့ ရှိနေရင်လဲ တာရှည်ခံ (ပင်နစလင်) ထိုးဆေး Benzathine penicillin G ကို တစ်ခါထိုးရင် ၂့၎ ယူနစ် တစ်ပါတ် တစ်ခါ၊ ပေါင်း ၃ ခါ ထိုး ရတယ်။
၄။ ကျားလိင်တံမှာ တစ်ခုမက ပန်းရောင်နဲ့ အရေပြားပေါ် ခပ်ဖေါင်းဖေါင်းလေး ဖြစ်တာမျိုးက molluscum contagiosum ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် မနာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ နာပြီး၊ ယားသလို ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုင်းရပ်စ် ဆေးတွေကို အားကိုးပါ။
၅။ ကျားလိင်တံမှာ အနာတွေက တစ်ခုမကလဲရှိ နာလဲနာ၊ ပေါင်ခြံမှာလဲ အကြိတ်ရှိတာ ဆိုရင် chancroid လို့ ခေါ်တယ်။ ၁ လက္မရဲ့ ရှစ်ပုံ ၁ ပုံကနေ ၂ လက္မထိ ရှိနိုင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းသား တိတိကျကျ ရှိတယ်။ ညီညီညာညာ မဟုတ်ဘူး။ ထိရင်၊ လှုပ်ရင် သွေးထွက် နိုင်တယ်။ မီးခိုးရောင် ဒါမှမဟုတ် ခပ်ဝါ၀ါနေမယ်။ ပဋိဇီဝဆေး azithromycin, ceftriaxone, ciprofloxacin, and erythromycin တွေက နိုင်တယ်။ ပေါင်ခြံ အကြိတ်က လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ရပါမယ်။
၆။ ကျားလိင်တံမှာ ခပ်မဲမဲ အကွက်ကို သာမန် မျက်စိနဲ့ မမြင်ရသလောက် ရှိတာမျိုးက ရှာရှားပါးပါး crabs ခေါ်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမွှေးတွေမှာ ဥတွေရှိနေပါမယ်။ သူ့ကိုကျ မြင်ရတယ်။
ဂ။ ပေါင်ခြံမှာ တခြား နေရာတွေမှာ ပေါက်တာမျိုး (ဗက်တီးရီးယား)ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရိုးရိုး ပြည်တည်နာတွေ (abscesses) လဲ ပေါက်နိုင်တယ်။ ပဋိဇီဝဆေးတွေက နိုင်ပါတယ်။
၉။ လိင်တံ ကင်ဆာ Cancer – penis
အမှန်ပြောရရင် ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာဖြစ်ဖြစ် ဘာ့ကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ကနေ့ အထိ မသိသေးပါ။
လိင်တံကို ဖုံးတဲ့ အရေပြားအောက်မှာ အနံ့ဆိုးဆိုး၊ ခပ်ပြစ်ပြစ် အညစ်အကြေးတွေ ရှိနေရင် ကင်ဆာ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ တစ်ချိန်က ကြွက်နို့ ဖြစ်ဖူးသူ၊ လိင်တံ အရေပြားကို ငုံနေပါလျက် မလှီးဖြတ်ထားသူ၊ သန့်ရှင်းရေး နည်းသူတွေဟာလဲ ကင်ဆာ ဖြစ်စေတတ်တယ်။
အနာ လိုလို အလုံး လိုလို အကြိတ်အခဲ လိုလို စ ဖြစ်တာပါ။ ကြွက်နို့နဲ့လဲ တူတယ်။ မုံလာပွင့်လို နေတယ်။ ဖြစ်ရင် မနာတာက များတယ်။ နောက်ကျမှ သွေးထွက်တာ၊ နာတာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ လိင်တံရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ အဖြစ် အများဆုံးပါ။
သေချာအောင် အသားစ ဖြတ်ယူ စစ်ဆေးနည်း biopsy လုပ်ရမယ်။ ကုသနည်းမှာ Chemotherapy ဆေးပေးတာ၊ Radiation ဓါတ်ကင်တာ၊ Surgery ခွဲစိတ် ကုသတာတွေ ပါတယ်။
(အသုံးအနှုန်း ရိုင်းတာလေးများ ပါသွားရင် ကန်တော့ပါဗျာ။)
Labels: Reproductive Health, STI
Q အမေရိကန် လူမျိုးတွေဟာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကောင်းသော အကျင့်တွေကို တစ်ချိန်လုံး သိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ဟာ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ပိုပိုပြီး ၀လာကြပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မျှော်လင့်ချက်များ ရှိနိုင်ပါသလား။
A အမေရိကန်တွေဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပညာ အတတ်ဆုံး လူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပညာ တတ်ကြပေမယ့် သတိမမူ မိကြတဲ့ အတွက် ပိုမိုပြီး ၀လာကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သတ်ိတရား မရှိရင် စိတ်အား ထက်သန်မှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကျန်းမာအောင် နေထိုင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိရင် ပညာတွေ ဘယ်လောက် တတ်တတ် ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Q. နှလုံးရောဂါဟာ ကမ္ဘာ့ နံပါတ်တစ် အသေအပျောက် အများဆုံးရောဂါ အဖြစ် တည်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ ထင်ပါသလဲ။
A. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အသက်ရှင် ရပ်တည်ဖို့ အတွက် အခရာပါ။ တစ်ခြား အင်္ဂါတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် သူက နားရတယ်လို့ မရှိပါဘူး။ လူတွေ သေကြရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ သွေးကြောတွေ မာလာတာကြောင့် အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကျွန်တော်တို့မှာ Plan B မရှိပါဘူး။
Q. ယနေ့ခေတ် ဆရာဝန် အများစုဟာ bedside manner လို့ ခေါ်တဲ့ လူနာနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ အားနည်း လာကြပါတယ်။ ဆရာကော လူနာတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ယခုလို ကိုယ်ချင်းစာတရား ရှေ့ထားပြီး ဆက်ဆံ တတ်အောင် ဘယ်လိုများ လေ့လာ သင်ယူခဲ့ပါသလဲ။
A. သင်ဟာ တစ်ခြား လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ပြုစုပေးရမလဲလို့ သိချင်ရင် အမျိုးသမီးတွေ ဆီကနေ သင်ယူ ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့် အမေဟာ ကျွန်တော့်ကို အကြွင်းမဲ့ ချစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေကတော့ အမေက သားသမီးတွေကို ဂရုစိုက်သလို ဂရုမစိုက် နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ နာမကျန်း ဖြစ်နေသူတွေရဲ့ မျက်လုံး အစုံကို စိုက်ကြည့်ပြီး သင့်အတွက် ကျွန်တော် ရောက်ရှိလာတာပါ။ သင့်ရဲ့ ဆေးဝါး ကုသမှု အတွက် အတတ်နိုင်ဆုံး အဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင် ပေးပါ့မယ်။
Q. အထူးကု ဆေးပညာ speciality ကို ရွေးချယ်ရ ခက်နေတဲ့ ဆေးကျောင်းသားတွေ အတွက် သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်က ဘာပါသလဲခင်ဗျာ။
A. ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အထူးကု ဖြစ်ချင်တဲ့ လူငယ်ဆရာဝန်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ထင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တကယ် လိုအပ်နေတာက အထွေထွေ ရောဂါကု ဆရာဝန်တွေပါ။
Q. ဆရာ ဆေးကျောင်းမှာ ကျောင်းတက် နေစဉ်တုန်းက တစ်စုံတစ်ယောက်က ဆရာကို ပေးဖူးတဲ့ အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်က ဘာပါလဲခင်ဗျာ။
A. ဆရာတို့ မင်းတို့ကို သင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်ဟာ မင်းတို့ဆရာဝန် ဖြစ်လာရင် မမှန်တော့ပါဘူး။
Q. အနာဂတ် ကာလမှာ ဘယ်လို ဆေးသိပ္ပံပညာတွေဟာ တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်လို့ ဆရာ ထင်ပါသလဲ။
A. မျိုးရိုးဗီဇကို ပြုပြင်ပြီး လူတွေ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကုသပေး နိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လောလောဆယ် လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာက ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ ဆွဲရမ်း နေသလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေ လူနာတွေကို ပေးနေတဲ့ ဆေးတွေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ ဆေးမှားပြီး ပေးတာ သို့မဟုတ် မှားယွင်းတဲ့ ပမာဏ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
Q. ပင်မကလာပ်စီး နည်းပညာ (stem cell technology) ကို အနာဂတ် ဆေးပညာမှာ မည်သို့ အသုံးပြု လိမ့်မယ်လို့ ဆရာ ထင်ပါသလဲ။
A. နောင်အနာဂတ်မှာ ယခုထက် ပိုမို အစွမ်း ထက်ရောက်တဲ့ ဆေးတွေ ပေါ်လာပြီး ပါကင်ဆင် ရောဂါလို ကုသ ရခက်တဲ့ ရောဂါတွေကို ထိရောက်စွာ ကုသ လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Q. ဆရာ့ရဲ့ နေ့စဉ် စားသုံးတဲ့ အစာနဲ့ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်က ဘာပါသလဲ ခင်ဗျာ။
A. ကျွန်တော် မနက် အိပ်ယာက ထရင် ခုနစ်မိနစ်လောက် ယောဂ ကျင့်စဉ် လေ့ကျင့်ပါတယ်။ အိပ်ယာ ထထချင်း အနည်းငယ်ပဲ လုပ်တယ် ဆိုတာက ဒီ တစ်ခုတည်းနဲ့ အချိန် မကုန်ချင်လို့ပါ။ အစားအသောက် အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်က မြေပဲစေ့လေးတွေကို ကြိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် ဘယ်သွားသွား ယူသွားတတ်တယ်။ ပြီးတော့ မြေပဲစေ့တွေကို စားနေရင်းနဲ့ တစ်နေ့လုံး ဗိုက် သိပ်မဆာတော့ဘူး။
Q. ဆရာရဲ့ ထင်မြင်ချက် အရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်တိုင်းပြည်ဟာ ထိရောက်မှု အရှိဆုံးနဲ့ ညီတူညီမျှ အရှိဆုံး ကျန်းမာရေး ၀န်ဆောင်မှု စနစ် ပိုင်ဆိုင်ပါသလဲ။
A. ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကျန်းမာရေး အာမခံ ထားရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အာမခံ မရှိတဲ့ လူတွေဟာ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာ ပိုမို ကုန်ကျပြီး ရလဒ်တွေလည်း မကောင်းလှတာ တွေ့ရပါတယ်။
Q. ဆရာဟာ ဆရာဝန်သာ ဖြစ်မလာခဲ့ရင် အခု အချိန်လောက်ဆို ဘာအလုပ် လုပ်နေလောက် ပါသလဲ။
A. ကျွန်တော် အသက် ရနှစ် လောက်တုန်းက ကျွန်တော့် အဖေနဲ့ အတူ ရေခဲမုန့် ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို သွားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှေ့မှာ တန်းစီနေတဲ့ ၁၀ နှစ်သား ကလေး တစ်ယောက်ကို အဖေက ခေါ်လိုက်ပြီး မင်းကြီး လာရင် ဘာဖြစ်ချင်လဲ ဆိုပြီး မေးလိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးက ပြန်ပြောလိုက်တာကတော့ သူ မသိဘူးတဲ့။ အဲဒီအခါမှာ အဖေဟာ ကျွန်တော့်ဘက်ကိုလှည့်ပြီး "ငါ့သား … မင်းဘ၀မှာ မင်း ဘာတွေ ဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အဖေ မသိဘူးကွာ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတဲ့ အဖြေမျိုး မင်းဆီက အဖေ မကြားချင်ဘူး။ မင်း ဆီမှာ အမြဲတမ်း ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် တစ်ခုတော့ရှိ ရမယ်" လို့ ကျွန်တော့်ကို ဆုံးမ ဖူးပါတယ်။ ရေခဲမုန့်ဆိုင်က အပြန်မှာ ကျွန်တော်ဟာ ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်ရမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။ အထက်တန်း အဆင့် ရောက်တော့ ကျွန်တော် ဘောလုံးသမား (American Football) ကစားသမား တစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့သေးပါတယ်။
Times Megazine တွင် ပါဝင်သော Dr. Mehmet Oz ၏ interview ကို ဘာသာပြန် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ Dr. Mehmet Ozရဲ့ ကိုယ်ရေး ရာဇ၀င်ကို ဖတ်ရှု လိုပါက အောက်ပါ link တွင် ဖတ်ရှု နိုင်ပါတယ်။
ဟားဗတ် တက္ကသိုလ်မှာ ရှိတဲ့ သုတေသီတွေဟာ သက်ရှိတွေမှာ ကြွက်က အစ လူ အဆုံး တွေရတဲ့ အသက်ကြီး ရသော၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အိုရသော အကြောင်းရင်းခံတွေကို လေ့လာနေကြပြီး တွေ့လုတွေ့ခင် ဖြစ်နေကြပါပြီ။ sirtuins လို့ ခေါ်တဲ့ ဗီဇ ဂျင်း(gene)လေး တွေဟာ ဆဲလ် (cell)နဲ့ ဒီအန်အေ (DNA) တွေ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားကြရင် ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးတဲ့ ဂျင်းလေးတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဆဲလ်တွေနဲ့ ဒီအန်အေတွေ ပျက်စီးတာ များလာတာ သဘာဝပဲလေ။ အဲဒီတော့ သူတို့လည်း မနိုင်ဝန်ပိလာပြီး အကုန်လုံးကို ပြန်ပြီးတော့ မပြုပြင်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီအခါမှာ အသက်ကြီးတယ် ဆိုတာ ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဘာလုပ်ကြည့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီ sirtuinsလို့ ခေါ်တဲ့ ဗီဇဂျင်းတွေကို ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ တည်ဆောက်ပြီး ကြွက်တွေထဲကို ထိုးကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ကြွက်တွေကို စောင့်ကြည့်ကြတော့ ဆေးအထိုးခံ ထားရတဲ့ ကြွက်တွေဟာ ၂၄ ကနေ ၄၆ ရာနှုန်းလောက် အထိ အသက် ပိုရှည်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်ကတော့ sirtuins ဗီဇဂျင်းတွေ များလာလေလေ ဒီအန်အေကို ပြုပြင်တဲ့ နေရာမှာ ပိုမို ထိရောက်လာပြီး ကြွက်တွေဟာ အသက်ကြီး လာပေမယ့် ငယ်ရွယ်တဲ့ ကြွက်တွေလို ပြုမူ နေထိုင်နိုင် ကြပါတယ်” လို့ သုတေသီ Philip Oberdoerffer က ပြောပါတယ်။ သုတေသီတွေ ထပ်မံ ပြောကြားချက် အရ သူတို့ရဲ့ တွေ့ရှိချက်ကြောင့် အသက်ကြီးခြင်း ဆိုတာ တစ်နေ့မှာ ပြောင်းပြန် ပြန်လှည့်လို့ ရတော့မှာပါတဲ့။
Ref: Reader's Digest August 2009
Labels: Latest Medical Findings
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ရှိတဲ့ သိပံ္ပ ပညာရှင်တွေဟာ လူတွေ ဘာကြောင့် သန်းရလဲ ဆိုတာကို သိဖို့ လူရဲ့ ဦးနှောက်ကို လေ့လာ နေခဲ့ ကြပါတယ်။ Albanyမှာ ရှိတဲ့ တက္ကသိုလ် တစ်ခုရဲ့ တွေ့ရှိချက်ကတော့ စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ အဲဒါကတော့ "သန်းခြင်းသည် ဦးနှောက်ကို အကူအညီ ပေးနိုင်ပါတယ်"တဲ့။ သုတေသီ Andrew C. Gallup နဲ့ Gordon G. Gallup Jr.တို့ရဲ့ ပြောပြချက် အရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ကျွန်တော်တို့ စားသုံးလို့ ရလာတဲ့ စွမ်းအင်တွေရဲ့ ၃၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိကို အသုံးပြုပြီး အပူဓာတ်ကို ပြန်လည် ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ သန်းခြင်းဟာ ဦးနှောက် ဆဲလ် တွေကို အေးမြစေပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ ပိုမို ထိရောက် စေပါတယ်။ သုတေသီတွေရဲ့ ထပ်မံ တွေ့ရှိချက်ကတော့ သန်းခြင်း အားဖြင့် ဦးနှောက်ကို သွေးစီးဆင်းမှု များပြားလာပြီး တာဝန်တွေကို ပိုမို ထမ်းဆောင် လာနိုင် စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုတေသီတို့ အဆို အရ ကျွန်တော်တို့ လူတွေကို အမြဲတမ်း သတိရှိ နေဖို့နဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေ ကနေ ကာကွယ်ပေးဖို့ အတွက် ဇီဝဗေဒ ဖြစ်စဉ် အရ သန်းခြင်းဆိုတာ မွေးကတည်းက ပါလာခြင်း ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Ref : Reader’s Digest August 2009
ကိုယ်အလေးချိန် တိုးချင်တာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါ။ မွေးရာပါ မျိုးဗီဇကိုက skinny body type ခပ်ပိန်ပိန် သမားများ အတွက် ပိုခက်ပါမည်။ ငါးကျီးခြောက် ကြပ်တင်လို့၊ ငါးဖေါင်ရိုးခြောက်လို့ အခေါ်ခံ နေရနိုင်တယ်။ ငါးများမှာတောင် ပိန်ရင် ငါးရာ-လူရာ မသွင်းဘူးထင်ပါရဲ့။ ကဲ - ဘယ်လို အ၀တိုးကြမလဲ။
၀ချင်ပါရင် အရင်ဆုံး ရောဂါဘယတွေ ကင်းနေဖို့ လိုပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း နာတာရှည်ရောဂါတွေက လူကို ပိန်သွား စေပါတယ်။ HIV-AIDS ကင်ဆာ၊ တီဘီ၊ လည်ပင်ကြီး ဟော်မုန်းများ နေသူ စသူတွေပါ။ တီဘီ ဖြစ်နေသူ တစ်ယောက် ဆေးပါတ်လည်လို့ ပျောက်လာရင် သေချာပေါက် ၀လာပါတယ်။ တိတိကျကျဆိုရရင် ညိုပြီး ၀လာတာပါ။ ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ကြည့်တာ ကောင်းတဲ့ အကျင့် ဖြစ်လို့ ဟော်တယ်တွေက ရေချိုးခန်း ထဲမယ် weighing machine ထားပေးတတ်တာပေါ့။ နေကောင်းပါလျက် ၀မလာတဲ့ သူတွေ အတွက် ဒီစာရေးတာပါ။ ၀နေပါလျက်နဲ့ နေမကောင်းသူတွေလဲ ရှိတာကိုး။
ခပ်မြန်မြန် သဘောပေါက်အောင် ပြောရရင် ၀ချင်ရင် ကြီးကြီးကြံပါလေ။ များများကြီး စားပါ။ ကျွန်တော်တို့ အိန္ဒိယကို ရောက်ခါစ ဦးမာသီရိ ဆိုတဲ့ စာပေဆုရဖူးသူ မိတ်ဆွေကြီးကပေးတဲ့ အကြံတစ်ခုက ဘာလဲဆိုတော့ “တံငါ ဖြစ်မှတော့ ငါးကြီးကြီး မျှားပါ”တဲ့။ တစ်ခါစားလဲ များများ၊ အကြိမ်လဲ များများ၊ ထမင်းလုတ် ကြီးကြီး၊ ထမင်း ပန်းကန် အစား ဇလုံ၊ ယောက်ချိုလို ဇွန်းကြီးကြီး သုံးပါ။ အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင် လူကောင်ကြီးသူတွေ လက်ရေး လက်သား သေးသေး၊ လက်မှတ်က ငယ်ငယ်လေး ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲတော့ လက်ရေးပါ ပြောင်းချင် ပြောင်းလို့ အကြံပေးရမလားဘဲ။
၀ချင်ရင် အလေး(၀ိတ်)မ ခိုင်းတာ ငြင်းစရာတော့ မရှိပါ။ များများ စားဖို့လောက်တော့ မထိရောက်ပါ။ ပိန်သူတွေရဲ့ ဇီဝကမ္မ ဆိုတဲ့ သက်ရှိတို့ ထုံးစံ လုပ်ပေးနေရတဲ့ ဖြစ်စဉ် ကိုယ်၌က မြန်မြန်ကြီး လုပ်နေသူတွေ ဖြစ်လို့ (ကယ်လိုရီ)တွေ ပိုရဖို့ လိုပါတယ်။ စာသင်သလို ပြောရရင် အဆင့် ၅ ဆင့်။
၁။ ခါတိုင်း တစ်နေ့မှာ (ကယ်လိုရီ) ဘယ်လောက်စားနေသလဲ။ ကိုယ်အလေးချိန် ချိန်ထားပါ။
၂။ စားနေတာထက် ၅၀၀ (ကယ်လိုရီ) ပိုစားပါ။ စားနိုင်အောင် ခါတိုင်း တစ်နေ့ ၃ ထပ်ကနေ ၄-၅ ထပ် စားပစ်လိုက်ပါ။
၃။ (၀ိတ်)မ ပါ။ gym သွားချင်သွား၊ အိမ်မှာပဲ လုပ်လုပ်။
၄။ ကိုယ်အလေးချိန် ပြန်ချိန်ပါ။ တစ်ပါတ် အပြီး ၁-၂ ပေါင် တိုးရင် ကောင်းတယ်။ ၁၀ ပေါင် မတိုးချင်ပါနဲ့။ ကျန်းမာရေး အရ အကောင်း မဟုတ်ပါ။ ၁ လ ကုန်ရင် ၅-၈ ပေါင် တိုးတာ ကောင်းတယ်။
တစ်နေ့ (ကယ်လိုရီ)ဘယ်လောက် လိုတာကို ဦးတိကျတွေ အတွက် ဖေါ်မြူလာရှိတယ်။ အရင်ဆုံး ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ လိုမယ့် နှုန်းထားကို တွက်ရတယ်။ Resting Metabolic Rate (RMR) လို့လဲ ခေါ်တယ် Basal Metabolic Rate (BMR) လို့လဲ ခေါ်တယ်။ လမ်းလဲ မလျှောက်၊ ပြေးလဲ မပြေး၊ အသာလေး နေတုန်း ကိုယ်ခန္ဓာက အသက်ရှူဖို့၊ နှလုံးခုန်ဖို့၊ အစာခြေနေဖို့ စတာတွေရဲ့ ဇီဝ အလုပ်တွေအတွက် လိုအပ်ချက်ကို ပြောတာပါဘဲ။
ပျင်းတော့ ပျင်းစရာကြီး။ သင်္ချာလို ထပ်ရှင်း ရအုံးမယ်။
တစ်နေ့တာ လိုမယ့်(ကယ်လိုရီ) သိဖို့ RMR ကို 1.25 နဲ့ မြှောက်လိုက်ပါ။ ဘယ်အစားက (ကလိုရီ)ဘယ်လောက် ဆိုတာ စာရှည်မှာ စိုးလို့ မထည့်တော့ပါ။ သီးခြားစာမှာ ဖတ်ပါလေ။
ပိုပြီး စားနိုင်အောင် စားပုံ စားနည်း ပြောင်းသင့်ရင် ပြောင်းရမယ်။ အ၀စား ၃ ခါနဲ့ အဆာပြေ၊ သွားရည်စာ ၂ ခါ၊ ၃ ခါ စားပါ။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် သောက်မယ့် အစား၊ နွားနို့၊ သစ်သီး ဖျော်ရည် သောက်ပါ။ ပေါင်မုန့် စားရင် အညိုက အဖြူထက် ပိုတယ်။ အသီးအရွက်မှာလဲ ရေများများ ပါတာမျိုး ဖြစ်တဲ့ ဂေါ်ဖီ၊ ပဲစိမ်းစားဥ၊ သခွါးသီးတို့ထက် အာလူး၊ ပဲမျိုးစုံ၊ မုံလာဥနီ၊ ပြောင်းဖူးတို့က သာတယ်။ အသီးတွေဆိုရင် လိမ္မော်၊ ပိခ်ျ၊ ဇီးသီး၊ ဖရဲသီးတွေထက် ငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော့သီး၊ ထောပတ်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ပန်းသီးတွေက သာတယ်။ (ဆု-ပ်)ဆိုတဲ့ ဟင်းရည်ဆိုရင် (ခရင်)ပါတာက အကြည်ရည်ထက် သာတယ်။
ဖြစ်နိုင်သမျှ အစားအသောက်တွေ ထဲမယ် စားသုံးဆီ ထည့်ရပါမယ်။ သံလွင်ဆီ၊ အုန်းဆီ၊ ထောပတ်ဆီတို့က နေကြာစေ့ဆီ၊ ပဲဆီတို့ထက် သာတယ်။ သာတယ်ဆိုတာ (ကယ်လိုရီ) ပိုရတာကို ပြောတာပါ။
မဖြစ်မနေ စားရမှာက (ပရိုတင်း)ဓါတ်ပါ အစာတွေ ဖြစ်တယ်။ အသားမျိုးစုံ၊ ငါးမျိုးစုံ။ စားနိုင်တဲ့ အသား အမျိုးမျိုး အပြင် (ကယ်လိုရီ) များများပါတဲ့ ထောပတ်၊ ဒိန်၊ (အောလစ်ဖ်)ဆီ၊ (ခရင်မ်)ဆိုတာတွေ ထပ်ဖြည့်ပါ။ အသား မစားသူတွေလဲ ၀နိုင်တာပါ။ ကြွက်သားတွေ မာတင်းပြီး သန်ချင်ရင်တော့ အသားစားသူများက ပိုသာပါတယ်။
ရှောင်သင့်တာတွေကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မကိုက်တဲ့ trans fat တွေများတဲ့ (ပက်စထရီ)၊ ကိတ်၊ ကွတ်ကီး၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အသား-ငါး၊ (မာဂျရင်)၊ အလွယ် ၀ယ်ရတဲ့ အစားအစာတွေပါ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ (ကလ်လိုရီ)အတော်ဖြုန်း ပစ်တယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်အေးအေးထားနိုင်အောင် လွမ်းစရာ ၀တ္တုတွေ မဖတ်နဲ့။ ဟောလိဝုဒ်က သရဲကား၊ (အေလီယန်)ကား၊ (အက်ရှင်)ကားတွေ မကြည်နဲ့၊ ဇာတ် မနာနာအောင်ရိုက်ထားတဲ့ ကိုရီးယားကား၊ ကုလားကားတွေ မကြည့်နဲ့။
စားခိုင်းတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ၊ စားချင်စိတ် ပိုကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဗီတာမင် ဘီအုပ်စု စားဆေး၊ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးတွေက အထောက်အပံ့ ပြုပါမယ်။ Cyproheptadine (Cypon) ဆိုတဲ့ဆေးက (အလာဂျီ) စတာတွေအတွက် ဆေးဖြစ်ပေမယ့် anorexia nervosa ခေါ်တဲ့ စားချင်သောက်ချင်စိတ် နည်းနေသူတွေ အတွက်လဲ ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေဟာ နည်းနည်း ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ ကျသွား၊ ပိန်သွား ဖြစ်တတ်တယ်။ (Cypon) တိုက်ရင်လဲ ခဏနဲ့ ပြန်စားချင် လာကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက အစပ်စားတဲ့လူ၊ (မဆလာ)ကြိုက်သူ၊ အချဉ် ပါမှ ဆိုသူတွေ ခံတွင်းတွေ့ရင် စားသာစားပါလေ။ အစပ်တို့၊ ဟင်းခပ် အမွှေးအကြိုင်တို့ ဆိုတာ စားချင်လာအောင်လုပ်ပေးတဲ့တန်ဖိုး ရှိတာတွေပါ။ တရုတ်နံနံ(ကြံမဆိုင်) ခတ် ထားတဲ့ ဟင်းချိုရည်က ပိုချိုသလို မဟုတ်လား။
ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွားစေတဲ့ ဟော်မုန်းဆိုတာ လူ့ဦးနှောက်ကနေ ထုတ်ပေးနေတယ်။ အလေးမသူများ ကြွက်သားတွေ သန်မာလာတာ သူ့အစွမ်းပါ။ သဘာဝ မဟုတ်ဘဲ အပို ဆောင်းချင်သူတွေ အတွက် (စတီရွိုက်)ဟော်မုန်းဆေးတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။ Growth hormone (GH), Growth factors and Testosterone-based analogs ဆိုတာတွေပါ။ ဒီဆေးတွေကို အရွယ်လွန်သူ ယောက်ျားတွေအတွက်ရော အားကစားသမားများ အတွက်ရော သုံးနေကြပေမယ့် သန်လာ၊ ကြီးလာအောင် လုပ်တာက အဓိကပါ။ ဒါပေမဲ့ ဟော်မုန်းဆိုတာ အစွမ်းကြီးပေမဲ့ သတိကြီးကြီးထား သုံးရတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
ချုပ်လိုက်ရင် ရောဂါကင်းရှင်း၊ ထမင်းဟင်း များများ၊ ဆေးဝါးလဲ စား၊ အလေးလဲ မ,ပါ ခင်ဗျား။
ဆူမိုနည်း ကျန်သွားတာ ထပ်ဖြည့်ပါရစေ။
ဆူမို နပမ်းသမား နည်းက (ကယ်လိုရီ)များတဲ့ အစာတွေ စား၊ အဆီ မများစေနဲ့။ (အင်စူလင်)ဆိုတဲ့ သကြားဓါတ် ထိန်းတဲ့ ဟော်မုန်းကို ဆွပေးစေတယ်။ (ကယ်လိုရီ) များရင် သိမ်းထားတဲ့ အဆီကို ထုတ်သုံးစရာ မလိုတော့ဘူး။ တစ်ခါတည်း များများ စားနိုင်အောင် တချို့ မနက် စောစောစာ မစားဘဲ နေတယ်။ ဆူမို နပမ်း သမားတွေ တစ်နေ့ကို (ကယ်လိုရီ) ၆၀၀၀ ကနေ ၂၀၀၀၀ အထိ စားသတဲ့။ သူလို ကိုယ်လိုတွေက တစ်နေ့မှ ၂၀၀၀-၃၀၀၀ သာ စားတယ်။ အရက် (ဘီယာ)လဲ သောက်ပါတဲ့။ တစ်ထိုင်ထဲ ဘီယာဗူး ၁၀၀ ကုန်သူဆိုတာ ရှိဆိုပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်း ပို ပြင်းပြင်းထန်ထန် နေ့တိုင်း လုပ်တာကြောင့် အစားစားချင်စိတ်တွေ ပိုလာတယ်။
ကနေ့ ကျန်းမာရေးသတင်း အသစ်စက်စက် တစ်ခုက မျောက်တွေကို စုထားပြီး စမ်းတဲ့အခါ အကောင်ကြီးသူတွေက နိုင်ချင်လို့ စိတ်ညစ်တဲ့ မျောက်တွေမှာ အဆီစုပြီး ၀မ်းခေါင်းကျယ်လာသတဲ့။ ကောက်ချက်ဆွဲရင် လူမှု စိတ်ဒုက္ခတွေကြောင့် ၀စေတယ် ဆိုပဲ။ နိုင်လိုမင်းထက် အနှိပ်စက် ခံနေရသူများ အတော်ဘဲပေါ့။
Posted by Dr. Tint Swe 12 comments
Labels: Nutrition အာဟာရ, Q and A
Posted by Dr. Tint Swe 81 comments